အစိုးရက ဒိုင်(ရင်ဒူး)ဟူသောရေးသားဖော်ပြ ချက်အပေါ် ရင်ဒူးဒါး(ရ်) မျိုးနွယ်စုများဘက်မှ မကျေမနပ်ဖြစ် - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»အစိုးရက ဒိုင်(ရင်ဒူး)ဟူသောရေးသားဖော်ပြ ချက်အပေါ် ရင်ဒူးဒါး(ရ်) မျိုးနွယ်စုများဘက်မှ မကျေမနပ်ဖြစ်
အစိုးရက ဒိုင်(ရင်ဒူး)ဟူသောရေးသားဖော်ပြ ချက်အပေါ် ရင်ဒူးဒါး(ရ်) မျိုးနွယ်စုများဘက်မှ မကျေမနပ်ဖြစ်
By admin on	 January 20, 2014 Headline
အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ချင်းလူမျိုး ၅၃ မျိုးရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားရာမှာ ချင်းပြည်နယ်တောင် ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသော ရင်ဒူးဒါး(ရ်) မျိုးနွယ်စုများက ဒိုင် (ရင်ဒူး)ဟု ဖေါ်ပြသည့် အပေါ် မကျေ မနပ်ဖြစ် နေကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၄ ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့နယ် ပင်လောင်း အုပ်စု ပင်လောင်း ကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြု လုပ်သော (၈)ကြိမ် မြောက် ရင်ဒူးဒါး(ရ်)စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မီတီ သင်းလုံးကျွတ်အစည်း အဝေးကြီး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၂၀၁၄ခုနှစ် တွင် ပြုလုပ်သွားမည့် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ သန်းခေါင် စာရင်းကောက် ယူရာတွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ လူမျိုးနွယ်စုတစ်ခု အဖြစ် ပြန်လည် သတ်မှတ်ပေးသွားရန်အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကြီးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ရုံးချုပ် သို့ပေးပို့ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှား ရောက် Yinduu Daa Social Organization (YDSO) ဥက္ကဌ Kauktu Naing Mana က အင်တာနက်မှတဆင့် ခိုနုမ်းသုန် သတင်းဌာန ကိုပြောကြား ခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့အစိုးရက မှားယွင်းစွာဖေါ်ပြသည်မှာ ဒိုင်မနားရှင်း(ငချင်းပျံ) ဆိုသူက “ဒိုင်ဓလေ့” စာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့ရာ ဒိုင်နှင့် ရင်ဒူးဒါး(ရ်)မှာ အတူတူဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြ ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ မနားရှင်းမှ ယင်းသို့ ဖေါ်ပြသည့်အပေါ် ရင်ဒူးဒါး(ရ်) စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မီတီမှ မနားရှင်းအား ကန်ပက်လက်မြို့ တွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းကြကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ တွေ့ ဆုံရာတွင် မိမိတို့ဒိုင်မျိုးနွယ်စုဘက်မှ မမှန်ကန် သောအကြောင်းအရာနှင့် အချက် အလက် များဖော်ပြခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံသည့်အနေဖြင့် စာရေးသူ အပါအ၀င် ဒိုင်မျိုးနွယ်စု လူကြီးမင်း များ နှင့်အတူ ၃၀/၁၁/၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်ရှိ ရင်ဒူးဒါး(ရ်)မျိုးနွယ်စု များ၏ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဖြစ်သော မြန်မာပြည်ဧ၀ံဂေလိဟောလီနက်(စ်) ဘုရား ကျောင်း (Myanmar Evangelical Holiness Church)၊ ကန်ပက်လက်မြို့၌ ကျင်းပသော အစည်းအဝေး တွင် ထုတ်ပြန် တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်း Mana ကပြောသည်။
အချက် (၇)ချက်ပါ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဒိုင်နှင့် ရင်ဒူး မျိုးနွယ်စု တခုမဟုတ်ကြောင်း၊ ဒိုင်မြေပုံတွင် ရင်ဒူး နယ်မြေများပါဝင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ပြီး ဒိုင် ဓလေ့စာအုပ်တွင် ရင်ဒူးဒါး(ရ်) ဓလေ့ထုံးစံများ ထည့်သွင်းရေးသား ထားခြင်းမှာ မှားယွင်းကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရင်ဒူးဒါး(ရ်) စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မီတီက နောက်နောင်တွင် ရင်ဒူးဒါး(ရ်) မျိုးနွယ်စု နှင့်ပါတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာ ရေးသားရာတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထုတ် မနားရှင်း (ငချင်းပျံ) ရေးသားထုတ်ဝေသော “ဒိုင်ဓလေ့” စာအုပ်ကို ကိုးကားခြင်းမပြုလုပ် ကြရန် သဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့ နောက် ၄င်းစာအုပ်တွင်ဖေါ်ပြသည့် မြေပုံတွင်လည်း ရင်ဒူးဒါး(ရ်) နေထိုင်သည့် နယ်မြေ၊ ကျေး ရွာ များပါဝင်သဖြင့် မမှန်ကန်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ရင်ဒူးဒါး(ရ်)ချင်းမျိုးနွယ်စု(Yinduu Daa Chin Ethnic people) များသည် ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်ဘာသာ၊ ကိုယ့်ရိုးရာ ထုံစံ စဉ်လာများကို ထိမ်းသိမ်းရင်း ကိုယ့်မြေ ပေါ်တွင် ရိုးသားစွာနေထိုင် လာသော မျိုးနွယ်စု များဖြစ်ကြောင်း၊ယင်းကဲ့သို့ အစိုးရမှ ဒိုင်(ရင်ဒူး)ဟူ၍ ဖော်ပြလိမ့်မည်ဟု၍ လည်း မထင်ကြောင်း၊ ဤကဲ့သို့ရေးသားဖော်ပြရခြင်းသည် ဒိုင်မျိုး နွယ်စုတို့၏ တဖက်မျိုးနွယ်စု၏ အားနည်းချက် အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာ လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း Mana ကဆိုသည်။
၂၀၁၃ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ဟားခါးမြို့ ၌ ကျင်းပသော ချင်းအမျိုးသားညီလာခံက ၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ သန်းခေါင် စာရင်းကောက်ယူရာ၌ လူမျိုးနေရာတွင် “ချင်း” ဟုသာထည့်သွင်းရန် သဘောတူထားသည့် အပေါ် သဘောမတူကြောင်း၊ မိမိတို့မျိုးနွယ်စုမှ Chin, Yinduu Daa စသဖြင့်သာ ဖြည့်စွက်စေလိုကြောင်း Mana ကဆိုသည်။
ရင်ဒူးဒါး(ရ်)ချင်းမျိုးနွယ်စုများသည် ချင်းပြည်တောင်ပိုင်း ကန်ပက်လက်မြို့ နယ်တွင်နေထိုင်သော လူမျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်သည်။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်တွင် ရင်ဒူးဒါး(ရ်) မျိုးနွယ်စု(Yinduu Daa )အပါအ၀င် အူပူးမျိုး နွယ်စု(Upu or Chinpon )၊ ငရာ့မျိုးနွယ်စု (Ng’yah )နှင့် ဒိုင်မျိုးနွယ်စု(Dai or Daaktu )တို့နေထိုင်ကြသည်။
ဇို(ချင်း) Zofate မျိူးနွယ်စုများကို ဘယ်နယ်နိမိတ်ကမှ ပိုင်းခြားခွင့်မရှိ: မီဇိုရမ်ဝန်ကြီး Lal Thanzara
ဟားခါးတွင် Chinlung Chhuak Zofate (ချင်း(ဇို)မျိူးနွယ်စုများ) တွေ့ဆုံကြမည်
Mnaai Kheng on January 21, 2014 11:16 am
ဒိုင် (ရင်းဒူး) ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်ဒူး( ဒိုင်) ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအရေးအသားက ဆရာ မနားရှင်းရဲ့ “ဒိုင်ဓလေ့” ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာက တော့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ချင်းသမိုင်း လေ့လာသူတိုင်း သိရှိကြပါမယ်..အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးနွယ်စုတွေ သတ်မှတ်ပေးတုန်းက ဒီအသုံးအနှုန်း တခုထဲကိုသာ လူမျိုးနွယ်စု ( Daai နဲ့ Daa) အတွက် သတ်မှတ်ပေးတယ်လို့ယူဆတယ်။ အရေးအသားတွေမှာ တွေ့ရမှာပါ။ သူတို့ (အစိုးရ) အထင်မှာ ဒီ ၂ စုက တမျိုးထဲလို့ ထင်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုချိန် နိုင်ငံရေးနဲ့ မိမိတို့ စာပေလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လာတဲ့ အချိန်မှာ လူမျိုးတိုင်းမှာ လူဦးရေများဘို့ လိုအပ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ တချို့လူမျိုးနွယ်စုတွေက ပေါင်းစည်းလာကြတယ်။ ကျနော်တို့ Daai တွေကတော့ အခုလို နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ မရှ်ိခင်ကတည်းက Daa ဆိုတာ ဒေသ အခေါ်ပဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့လူမျိုးတူတွေပဲလို့ ထင်ခဲ့ကြတာ၊ အခုမှ ကျတော့တို့လူမျိုးမှာ ပေါင်းခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ “ဒိုင်မျိုး နွယ်စုတို့၏ တဖက်မျိုးနွယ်စု၏ အားနည်းချက် အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာ လုပ်ဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း” ဆိုတဲ့ အချက်မှာ တဘက် လူမျိုးနွယ်စု အတွက် မစဉ်းစားပဲ တဘက်သတ် ပြောဆို ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း အားလုံး သိရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒိုင် ( ရင်ဒူး) ဆိုတာ အခုမှ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးနွယ်စု ၁၃၅ မျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ အချိန်ကနေ သတ်မှတ် ပြီးသားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Salai on January 21, 2014 11:51 pm
You also can read this page to find out some information about yinn du Daa.
Mnaai Kheng on January 22, 2014 6:09 am
ပေးထားတဲ့ blog ထဲကဟာတွေလည်းဖတ်တယ်။ တခြားသမိုင်းစာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ “ရင်ဒူး” ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရှိ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အ၀တ်အစားပုံစံမှ စတင်ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်လို့ ရေးသားထားကြပါတယ်။ အခုရိုးရာ ၀တ်စုံလို့ ပြောတဲ့ ဟာတွေက နောက်ပိုင်းမှ ပေါ်လာတဲ့ ၀တ်စုံတွေပါ။ လူမျိုးတမျိုးဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ ဘာနဲ့တိုင်းတာလည်း ဆိုရင် သူတို့ပြောဆိုတဲ့ ဘာသာ စကားအခြေခံ ဝေါဟာရ၊ ရိုးရာရာ ဓလေ့ထုံးစံများ အားဖြင့်သာ တိုင်းတာ ကြပါတယ်။ သုတေသန မလုပ်ရင်တောင်မှ Daa နဲ့ Daai ဒေသအားလုံးကို သွားရောက်ပြီးလေ့လာ သူတိုင်း လူမျိုးတမျိုးဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူမျိုးတမျိုး အဖြင့် သီးသန့်ရပ်တည်ချင်ရင်တော့ ရပ်တည်ရင်လည်း ရမှာပါ။ အဓိကပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ က သီးသန့်လူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တခြားကွဲပြားတဲ့ နာမည်တွေ ပေးထားရင် ပေးထားမယ်..ဒါမဲ့ ” ဒိုင် (ရင်ဒူး)” ကတော့ ကျွန်တော်တို့လူမျိုး ၂ မျိုးစလုံးကို ညွှန်းထားတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဒီအသုံးအနှုန်းက Daa ကိုပဲ ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုရင် Daai အတွက်က တခြားနာမည် မရှိတော့ဘူး။ ဒီ ဒိုင် (ရင်ဒူး) က Daa ကို ကိုယ်စားမပြုဘူး Daai ထဲပဲ ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေါ့။ ဒိုင် (ရင်ဒူး) ကုတ်နံပါတ်-၄၃၀ က Daai ကိုကိုယ်စားပြုတာလား? ဒါမှ မဟုတ် Daa ကို ကိုယ်စားပြုတာလား? Daa ကို ကိုယ်စား မပြုပဲ Daai ပဲကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုရင် Daa အတွက် ဘယ်ကုတ်နံပါတ်တခုကို သုံးတာလည်း ဆိုတာ အရင်ဖြေပေးပါ။ ( ဥပမာ..အူးပူ- ၄၅၀ စသည်ဖြင့်ပေါ့)။ ပြီးမှ ဆက်ဆွေးနွေးမယ်။
Kauktu Naing Mana on January 22, 2014 4:05 pm
အစိုးရက ဒိုင် (ရင်းဒူး)ဆိုတဲ့အရေးအသားက ဒိုင်မနားရှင်းရဲ့ “ဒိုင်ဓလေ့” ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။သတင်းယူပေးတဲ့ ဆရာရဲ့ သတင်းအဓိပ္ပာယ်လေး လွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်မနာရှင်းက ၂၀၁၃ မှာဘဲ စာရေးတာပါ။ ဒိုင်မနားရှင်းမှ”ဒိုင်ဓလေ့” စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ရာမှာ ဒိုင်နှင့် ရင်ဒူးဒါး(ရ်)မှာ အတူတူဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အပေါ် ရင်ဒူးဒါး(ရ်)စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မီတီ၊ ကန်ပက်လက်မြို့မှ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံမေးမြန်းကြရာတွင် မိမိတို့ဒိုင်မျိုးနွယ်စုဘက်မှ မမှန်ကန် သောအကြောင်း အရာများ အချက်အလက်များဖော်ပြချက်ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သော ဒိုင်မျိုးနွယ်စုလူကြီးမင်းများနှင့်အတူ စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်မှ ၃၀/၁၁/၂၀၁၃နေ့ရက်တွင် အစည်းဝေးတတ်ရောက်သူအခြားမျိုးနွယ်စုဖြစ်သော ငရာ့၊ မွင်း၊ အုပူးချင်းပုံ စသော လူဦးရေ စုစုပေါင်း(၂၈)ဦးတို့ဖြင့် မြို့မ(၂)ရပ်ကွက်ရှိ ရင်ဒူးဒါး(ရ်)မျိုးနွယ်စုများ၏ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သော မြန်မာပြည်ဧ၀ံဂေလိဟောလီနက်(စ်)ဘုရားကျောင်း(Myanmar Evangelical Holiness Church)၊ကန်ပက်လက်မြို့တွင် အခြားသောမျိုးနွယ်စုများ(မွင်း၊ငရာ့၊အုပူး(ခ)ချင်းပုံ) စသော အသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် ပြန်လည်တောင်းပန်စာကို ရင်ဒူးဒါး(ရ်) စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မီတီ သို့ပေးပို့လာပါသည်။
၁။ဦးကီးထန်းလွန်း- ဒိုင်လူမျိုးနွယ်စု ပြည်နယ်လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်။
၂။ဦးနိူင်ဆော(ဒိုင်)- ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အတွင်းရေးမှုး။
၃။သိက္ခာတော်ရဆရာတော်-မနားနိူင်း -ဒိုင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေး မှုကော်မီတီ၊ ကန်ပက်လက်မြို့တာဝန်ခံ။
၄။သိက္ခာတော်ရဆရာတော် လွန်းထန်း – ဒိုင်စာပေနှင့်ယဉ် ကျေးမှုကော်မီတီ၊ ကန်ပက်လက်မြိုံ့။
၅။ဦးလိန်းပိုင်း – ဒိုင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မီတီ၊ ရန်ကုန်တာဝန်ခံ။
၆။ဒိုင်မနားရှင်း(ငချင်းပျံ) -ဒိုင်ဓလေ့ စာအုပ်ရေးသူ ကိုယ်တိုင်တို့မှ ဒိုင် နှင့် ရင်ဒူးဒါး(ရ်)လူမျိုးစုတို့မှာ မတူကြောင်း အမှန်တရားကို ပြန်လည်ဝန်ခံကာ တောင်းပန်လာပြီး ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့လို တခြားသောလူမျိုးနွယ်စုတွေက ဒိုင်မျိုးနွယ်စုတွေကို ဒိုင်တူ(ခ)ယိမ်း( Daaktu (or) Ng’Ying) လို့ဘဲခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါး(ရ်)(DAA)ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်က ရင်ဒူးဒါး(ရ်)မျိုးနွယ်စုတွေကို ခေါ်တဲ့ နာမည်ဖြစ်တယ်။“ရင်ဒူး” ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လူမျိုး အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံမှ စတင်ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်လို့ သမိုင်းအထောက်အထားနဲ့ ရိုးရာအ၀တ်အစားတွေက သက်သေထူပါတယ်။ ဒိုင်မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဟာ ရင်ဒူးဒါး(ရ်)မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ လုံးဝခြားနားတယ်။ ဒိုင်မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံကတော့ စကတ်တိုတို(Skirt)အမည်းရောင်လေးဘဲ ယနေ့ထက်ထိတိုင် ၀တ်ဆင်ကြပါတယ်။ စကတ်(Skirt)ကို ရင်ဒူးဟုခေါ်ရ လောက်အောင် ၀တ်လို့ရမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒိုင်(ရင်ဒူး) ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ဒိုင်မျိုးနွယ်စုထဲက နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးလှည့် ကွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။“ဒိုင်မျိုး နွယ်စုတို့၏ တဖက်မျိုးနွယ်စု၏ အားနည်းချက် အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာလုပ် ဆောင်ခြင်းသာဖြစ် ကြောင်း” ဆိုတဲ့ အချက်မှာ တဘက် လူမျိုးနွယ်စုအတွက် မစဉ်းစားပဲ တဘက်သတ် ပြောဆိုလုပ်ဆောင် တတ်သော စရိုက်ကိုဖော်ပြလိုချင် ဖြစ်သည်။လူမျိုးတမျိုးဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ ဘာနဲ့တိုင်းတာလည်းဆိုရင် သူတို့ပြောဆိုတဲ့ ဘာသာစကားအခြေခံ ဝေါဟာရ၊ ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးဓံစဉ်လာများအားဖြင့် တိုင်းတာ ကြပါတယ်ဆိုတာတော့ ခင်ဗျားမှန်တယ်။ဒိုင်နဲ့ ရင်ဒူးဒါး(ရ်)တွေမှာ ဘာသာစကား ကလည်း လုံးဝမတူညီသလို ယဉ်ကျေးမှုတွေလဲ လုံးဝ ခြားနားပါတယ်။သုတေသန မလုပ်ရင်တောင်မှ Daa နဲ့ Daai ဒေသအားလုံးကို သွားရောက်ပြီးလေ့လာ သူတိုင်း လူမျိုးတမျိုးဆိုတာ သိကြမှာပါဆိုတာကတော့ Mnaai Kheng လုံးဝမှာနေတာ ကိုတွေ့ရမှာပါ။ အထက်ဖော်ပြပါ ဒိုင်လူကြီးတွေကတောင် မတူပါဘူးလို့ဝန်ခံနေမှ ဘာကြောင့် ဆက်ပြီးလိမ်ညာချင်နေရတာလဲ။ဒိုင် (ရင်ဒူး) ကုတ်နံပါတ်-၄၃၀ က Daai ကိုကိုယ်စားပြုတာလား? ဒါမှ မဟုတ် Daa ကို ကိုယ်စားပြုတာလား ဆိုတဲ့နေရာမှာ မေခွန်းမေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။
Mnaai Kheng on January 23, 2014 11:08 am
လူတိုင်းမှာ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်နိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးရှိတယ်..လူတယောက်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ မျိုးနွယ်စုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ သွားရောက်ချုပ်ချယ်လို့မရဘူး။ အဲတာကြောင့် Daa တွေကို Daai ဆီမှာ အတင်းပေါင်းခိုင်းလို့လည်း မရဘူး။ သူ့တို့မှာလည်း သူ့တို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်၊ ခံယူချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ရှိနေမှာပဲလေ။ အဲတာကြောင့် အခုဟာက တဘက်လူမျိုးရဲ့ အားနည်းချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အတင်းပေါင်းခိုင်းစေချင်တာ မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောပြီးသလို လူမျိုးနွယ်စုတူတွေပဲလို့ သတ်မှတ်ပြီး ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ ဥပမာ..လူမျိုးနွေးစု တစုထဲပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း ခွဲထွက်ပြီး သီးသန့်ရပ်တည်ချင်ရင်တော့ ရပ်တည်လို့လည်းရမှာပါ။ Daai လူကြီးတွေကတောင်းပန်တယ်ဆိုတာ လည်း ကျွန်တော်သိတယ်..သူတို့ကလည်း ပြဿနာ မကြီးစေချင်ပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာ သူတို့နားလည်တယ်။ Daa နဲ့ Daai အခြေခံဝေါဟာရတွေမတူဘူး၊ ယဉ်ကျေးမှု မတူဘူးဆိုတာကတော့ ဆက်ပြီး လေ့လာစေချင်တယ်။ ချင်းလူမျိုးတွေကြားမှာ တရွာနဲ့ တရွာ အသံကွဲတာက အားလုံးပါ။ လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ရင် ဘာသာစကားလည်း ရာနှုန်းပြည့်တူညီမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ ဘာသာဗေဒနည်းအရ ဘယ်လောက်တူညီရင် လူမျိုးတမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ရှိတယ်..ပြီးယဉ် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ရိုးရာ သီချင်းတွေ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေက အစ အသေးစိတ်လေ့လာစေချင်တယ်…အမျိုးသမီးတွေ ထမီဝတ်တာကိုလည်း ဘယ်အထိရောက်အောင်ဝတ်ကြလည်း ဆိုတာ အသေးစိတ် လေ့လာစေချင်တယ်..ဒီလိုပြောလို့ Daai မှာ ပေါင်းလာဘို့ ဆွဲဆောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အကြိုးအကြောင်းကိုပြောတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..ကျွန်တော်ပြောတာ မှားချင်မှားနိုင်မယ်။။ မှန်ချင်မှန်မယ်…အမှန်တရားတခုတော့ ရှိနေမှာပဲ..အဲတာကြောင့် လေ့လာစေချင်တာပါ။ နိုင်ငံရေးအလှည့်အပြောင်းတွေကြောင့် မကွဲပြားသင့်တဲ့ လူမျိုးတွေလည်း ကွဲပြားခဲ့ရတယ်။ တခြားလူမျိုးတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ပြဿနာတွေတော့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါင်းချင်ရင် ပေါင်းနိုင်ကြတယ်..မပေါင်းချင်ရင် မပေါင်းကြဘူး။ ပေါင်းတဲ့ သူတွေကတော့ နိုင်ငံရေးမှာကော စာပေလုပ်ငန်းပိုင်းမှာပါ မြတ်ကြတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကို တချို့ချင်းတွေက အစမှာ သူတို့စကားတွေ အရမ်းကွဲသလို ထင်ခဲ့ကြတယ်..ပေါင်းကြပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဘာသာစကားတမျိုးသုံးနိုင်သလို ဘက်စုံမှာ အင်အားရှိကြတယ်..သူတို့လို သာ ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းတွေလည်း စုစည်းနိုင်ကြရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ စဉ်းစားဖူးတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မျိုးနွယ်စု အနေနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်မှု မရှိရင်လည်း အတူတကွ လုပ်ငန်းတွေ ပေါင်းစည်း လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..အဓိကတော့ ကျွန်တော်တို့ဒေသ၊လူမျိုးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပါပဲ…လက်တွဲပြီး ဒေသရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အတူတကွလုပ်ကိုင်နိုင်ကြမယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ ဆုလည်း တောင်းပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ…